» रमाइलो संसार
सेताे बिरालाेकाे भविष्यवाणी मिल्याे !
विश्वकप २०१८ को उद्घाटन खेलमा कान नसुन्ने सेतो बिरालोले गरेको भविष्यवाणी अनुसार आयोजक रसियाले साउदीमाथि सानदार जित निकालेको छ।
क्रिकेटबारे चासो राख्नेहरुलाई थाहा छ । क्रिकेटमा १ -१ रनको ठूलो महत्व छ । १ रन लिनका लागि पनि मेहनत गरेर दौडिन्छन् खेलाडीहरु । तर तपाइँलाई पत्याउन गाह्रो पर्ला क्रिकेटको इतिहासमा १ बलबाट २८६ रन सम्म आएको रेकर्ड छ ।
बुढी वेश्याहरुको जिन्दगी (फोटोफिचर)
रेष्टुँरामा लोकप्रिय बन्न थाल्यो मुसाको कवाब
एक्लो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ ? अधबैंसे मानिसलाई भाडामा लिनुहोस्
महिलाको झोला कति फोहोर ?